सेनाको कुटपिटवाट मृत्युभएको चेपाङ परिवारलाई उचित क्षेतिपूर्ती दिन प्रशासनलाई दुईदिने अल्टिमेटम | PBM News.com
चितवन १६ साउन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षार्थ कटिएका सेनाको कुटपिटबाट मृत्युभएको राजकुमार चेपाङको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत स्वरुप दिनुपर्ने माग सहित दुईदिने अल्टिमेटम दिएको छ । अन्य घाइते चारजनालाई उचित निशुल्क उपचार गर्नुपर्ने नेपाल चेपाङ संघले भरतपुरमा शुक्रवार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत माग गरेको हो । दुईदिन भित्र आफुहरुको माग संवोधन नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सेनाको कुटपिटबाट मृत्युभएको चेपाङको परिवारलाई राहत स्वरुप नगद १० लाख रुपैयाँ सहित उचित्त क्षतिपूर्तीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यस्तै कुटपिटमा संलग्न सेनालाई कडा कार्वाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । माडी घटनाको सम्बन्धमा संघले ६ बुद्धे माग सार्वजनिक गरेको छ । पीडित परिवारलाई गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । उनीहरुलाई तत्काल पुर्नवास गर्नुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ । चेपाङको घरमा आगजनी गर्ने, भत्काउने, अन्नबाली नष्टगर्ने, गराउन निर्देशन दिने कर्मचारीमाथी तत्काल छानविन गरी बर्खास्त सहितको कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
यसैगरी चेपाङ समुदायलाई स्थानान्तरण गर्दा उनको परिवारलाई प्रशस्तमात्रामा जिविकोपार्जन गर्न सक्नेखालको बैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्रै पुर्नबास गर्नुपर्ने संघको माग छ । जल, जंगल र जमिनमा रमाउने समुदायको रुपमा रहेको चेपाङलाई पटक पटक निकुञ्ज प्रशासनले मानसिक र शारीरिक यातना दिने गरेको भन्दै आइएलओ १६९ महासन्धीमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । नेपाल चेपाङ संघका केन्द्रीय पूर्व अध्यक्ष गोविन्दराम चेपाङले आफुहरुको माग आइतवार सम्म संवोधन नभए चितवन सहित छिमेकी तीनवटा जिल्लामा सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । चितवन सहित, मकवानपुर र धादिङ जिल्लाका चेपाङहरु हातमा कुटोकोदालो बोकेर आन्दोलनमा निस्किन्छौं – उनले भने ।
आन्दोलनको कार्यक्रमहरु पनि तय भइसकेको जानकारी दिँदै पूर्व अध्यक्ष चेपाङले चेपाङ समुदायको मागलाई प्रशासनले संवोधन गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार आइतवार देखि मकवानपुर, धादिङ र चितवनका विभिन्न ठाउँमा चक्काजाम गर्ने, चितवन प्रशासन कार्यालय अगाडी धर्ना दिने र यो बीचमा भरतपुरको केन्द्रीय बसपार्कको परिसरमा तीनवटै जिल्लाका चेपाङहरुलाई बोलाएर बृहत विरोध सभागर्ने तयारी छ ।
साउने संक्रान्तिका दिन राप्ती नदीमा माछामार्न जाँदा सेनाको कुटपिटबाट राप्ती नगरपालिकाको वडा नं. २ बस्ने राजकुमार चेपाङको मृत्युभएको परिवारको दावी छ । पोष्टमार्टमका लागि काठमाण्डौं लगिएको राजकुमारको शव टिचिङ हस्पिटलमा राखिएको छ । माग संवोधन नभए सम्म शव नबुझ्ने परिवारले अडान लिएका छन् । उता माडी नगरपालिकाको वडा नं. ९ कुसुमखोलामा साउन ३ गते २ वटा चेपाङको घरमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारीहरुले हात्ती लगाएर आगजनी गरेका थिए ।
पहिरोले घर पुरिँदा दुई जना बेपत्ता